Cutter အပ်ချုပ် Thread | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
ကြှနျုပျတို့မှာ Taiwan ငွေရတတ်သောသူအရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာ Cutter အပ်ချုပ် Thread ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည် သာ. ထက် 8 နှစ်အထူးထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံတင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစံချိန်စံညွှန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အမိန့်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်လိုအားထမ်းဆောင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါကလွတ်လပ်စွာကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - Zigzag stitch trimmer
Juki Zigzag ချုပ်
ဤ Juki Zigzag ညှပ် LZ အတွက်အထူးသင့်လျော်သည်-2280,LZ-2284,နှင့် LZ-2290.ဓါးသွားများကိုအထူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်.အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ချုံ့ပေးတဲ့ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်တွေလည်းရှိတယ်-zigzag စက်များအလိုအလျောက်ချုံ့.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/thread-cutter-sewing.html
Cutter အပ်ချုပ် Thread ထုတ်လုပ်သူနှင့် Cutter အပ်ချုပ် Thread ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 46,338 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw